ko htike's prosaic collection: ကျွန်တော်ကြားနေရသော ကျော်ဟိန်း၏ နောက်ဆုံး နေ့များ (၂)
Posted by ကိုထိုက် at 00:13
ဟိုတစ်နေ့က ကျော်ဟိန်း ဟောပြောပွဲဆိုတာမျိုးကို Video တွေ့လိုက်တယ်။ ပထမ တစ်ပိုင်းကြည့်ပြီး ကျွန်တော် ပိတ်လိုက်တယ်။ တစ်ပိုင်းပဲကြည့်ပြီး မဝေဖန်သင့်ဘူးလို့တော့ ပြောစရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်.... အဲဒီအထဲမှာကို အညှီအဟောက်တွေ ပါလွန်းလို့ ကျွန်တော် ဆက်မကြည့်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။
(ချမ်းသာဖို့ကတော့ ဓားပြတိုက်လဲ ချမ်းသာတာပဲ၊ လုပ်သင့်မလုပ်သင့်ဆိုတာ အတွက် ပညာလိုအပ်တာ)
အဲဒီလိုအတွေးတွေ ရှိနေလို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံခုလိုဖြစ်နေတာ
သန်းရွှေတို့ ကြံ့ဖွံ့တို့ဆိုတာ ဒီလိုအတွေးအခေါ်တွေကြောင့် ပေါ်လာတာ
ဆရာ အောင်သင်းဟောပြောပွဲတို့ ဆရာ လူထုစိန်ဝင်း စာအုပ်တို့ကို ဖတ်ဖူးတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ဘာမှကို အနှစ်အသားမပါပဲ အလကား သရုပ်ဆောင်ပြနေသလိုပါပဲ။
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ လုပ်ပါ အနုပညာအလုပ်တွေ ကိုယ်လဲ မလုပ်တတ်သလို အပြစ်လဲ မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုလို့ လူငယ်အတွက် ဆိုတာမျိုးတွေ။ နိုင်ငံအတွက်ဆိုတာမျိုးတွေ ဘာသာအတွက်ဆိုတာမျိုးတွေ။ အဲဒီနေရာမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်တွေကြီး စကားလုံး အကြီးကြီးတွေ လျှောက်ပြော ၀မ်းစာကမရှိ။ လူတွေ အထင်ကြီးပြီး နားယောင်မိရင် ဆိုတာမျိုးတွေးလိုက်ရင်..........
ကျေးဇူးပြုပြီး မလုပ်ကြပါနဲ့ ကိုယ်ကို ကိုယ် အရမ်းအထင်မကြီးကြပါနဲ့လို့သာ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဆရာအောင်သင်းကို သရုပ်ဆောင်ခိုင်းရင် ကျော်ဟိန်းလောက် လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြော ရင် လက်ခံပေးလို့ရပေမယ့် အခုလို ဟောပြောပွဲမှာတော့ စေတနာရော အတတ်ပညာရော စိတ်ဝင်စားမှုရော ပါရမီရော အကျိုးရှိမှုရော ၀မ်းစာပြည့်ဝမှုရော တပြားသားမှ မမှီပါဘူးဆိုရင် စိတ်ဆိုးစရာ မရှိဘူးထင်ပါတယ်။
အကျိုးမရှိတာကိုလက်ခံပါသေးတယ်။ သူအချိန်ကို သူသုံးတာပဲ။ ဘာလုပ်လုပ် ကျွန်တော်ဘာပြောစရာရှိလဲ။ ဒါပေမယ့် အခုဟာက တစ်နိုင်ငံလုံးလှည့်ပြီး ဖျက်ဆီးမယ့်သဘောဖြစ်နေတာက ခက်ပါတယ်ဗျာ..........
ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီအကြောင်းလေးကို ဝေမျှပေးကြပါ။
10 September 2008 at 03:45
ဆက်သာ ဝေဖန်ပါ။ မှားနေတဲ့ လူကို ဝေဖန်ရ တာ ကုသိုလ် ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာ တစ်ခုခုများ ရှိနေမလားပဲ။
ခုလို ရွှေဝါရောင် နှစ်ပတ်လည်ကြီးမှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တနိုင်ငံလုံး တရား လည်ဟောတာဟာ ရိုးရိုးတော့ ဖြစ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။
ဦးကျော်ဟိန်း တစ်ယောက် စားဖားများ ဖြစ်နေပြီလား မသိဘူး။
ပြည်သူတွေကိုတော့ သူ့ကြောင့် အာရုံပြောင်းမသွားစေချင်ဘူး။
ရဟန်းစစ်တွေ ခံရတာ နှစ်ပတ်လည်ချိန်မှာ ရဟန်းတု ကို သပိတ်မှောက်ပြီး သာသနာ ကို ပြည်သူတရပ်လုံး ရှင်းသန့်သင့်ပြီ ဗျာ။
သံဃာ့နာယက တွေ လည်းမ ရှက်ဘူးလား မသိဘူးဗျာ။ ရဟန်းတုကို ခုလို လှည့်လည် တရားဟောခွင့် ကို မပေးသင့်ဘူး။
ခုလို လှည့်လည်တာ သံဃာ့နာယက ကို ခွင့်တင်သလား ဆိုတာ မေးစရာပဲ။ ခွင့်တင်လို့ ခွင့်ပြုခဲ့ရင် သံဃာ့ နာယက အမှားပဲ။ ဒါမှမဟုတ်......ဦးကျော်ဟိန်းကပဲ တခြား သံဃာ့နာယက တဲ့ စွမ်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ နဲ့ ပေါင်းလုပ်နေသလား။
သာသနာ နဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် သံဃာမဟာနာယက ဟာ အထူး စဉ်းစားသင့်ပါပြီ။
မြန်မာပြည်သူတွေ အသိပညာ လင်းပ နိုင်ပါစေ။
10 September 2008 at 04:45
I agree with u mate.I don't believe U Kyaw .He using this for his fame.
I am sorry for Sex, Drug and Rock & Roll Kyaw Hein.
He knows he must do something before too late. Unfortunately, he still does not know what is right or wrong.
This is because he hasn’t got any education. I remember he ran for his life likeadog from the angry mob of RASU students.
Kyaw Hein and the camera crew filmed the seen in front of the RASU convocation hall.
He was in the convocation gown (robe) asagraduate student accompanied by the family for the clip, and so many students were watching their making of the film. At the end of the filming, he tossed the convocation cap with his foot likeafootball on the convocation hall front lawn.
All the students were outrage because of the insult. People start shouting and throwing with the stones to their crew.
From that day, he came into RASU daily and pickedagirl(different) on the back of his motorbike asarevenge.
He destroyed so many innocent girls life with his fame.
Finally, he met with this current wife Mi Mi and took her on his bike like the others.
Kyaw Hein, Zaw Zaw(his brother) and thugs badly beaten up Mi Mi’s long-term lover Zarly Nyunt.
Unfortunately for him was, Mi Mi elder brother is married to General Nay Win daughter Kyaymon Win.
Although Mi Mi family does not want to get involve with him, they can not stop their teenage daughter.
Finally, General Nay Win daughters Sandar and Kyaymon called him to their Link Road flat and warned him not to mess-up with their family. Kyaw Hein knew what can happen to him after seeing the other star ending story(eg. Zaw One).
Due to the Nay Win background, he has so many privileges and business advantages. Traffic police from Swe-Gon-Dyne used to salute and clear the way for their family.
Their family used to follow Nat spiritual and celebrate the Nat Pwe regularly at home.
BeingaBuddhist he desperately needs to fix something out for his pass. His time is running out and still do not know what is right or what is wrong due to the poor knowledge. Poor Kyaw Hein!
အ ဘ ။ said...
၁၉၇၀ လောက်က အမေနဲ.အတူ မန္တလေးမြို.က ရပ်ကွက်ထဲက ဒုတိယနေ.တရားပွဲမှာ တရားနာနေတုန်း....
တရားဟောတဲ.ဆရာတော်...ရုတ်တရက်ရပ်သွားပြီး...တရားဟောစင်ပေါ်အသက် ၄၀ပါတ်ဝန်းကျင် ဦးဇင်း ၂ပါးတက်လာတယ်.....တရားဟောတဲ. ဘုန်းဘုန်း ကိုဆက်မဟောဘို.မေတ္တာရပ်ခံပြီး.....ဆရာတော်ဟောတဲ.တရားထဲမှာ ဗုဒ္ဓဟောတဲ. တရားနဲ. ဘယ်အပိုင်းတွေမှာ ဆန်.ကျင်နေကြောင်း အထောက်အထားများနဲ.သေချာတရားနာပိရိသတ်များရှေ.မှာရှင်းပြပြီးတရားပွဲကို ရပ်ပြီး ထိုဘုန်းကြီးကို လည်းပင်.သွားတာ တွေ.လိုက်ရတယ်.....အမေက ဘာပြောလဲဆိုတော. အဲဒီကိုတော်တွေဟာ ရဟန်းပျိူ အဖွဲ.ကဖြစ်ပြီး...သာသနာသန်.ရှင်းဘို.ရာ အတွက်ဒီလိုလုပ်ရတာလို.ပြောတယ်.....
ဦးကျော်တယောက်လဲ.....ဗုဒ္ဓရဲ.ဘာသာ တရားတွေ....အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ.မယ်.......အရင်ကလို ရဟန်းပျိူအဖွဲ. ရှိအုန်းမယ်ဆိုရင်တော.....မဖြစ်သင်.တာတွေမဖြစ်တော.သလို.......ဗုဒ္ဓဘာသာ ကါကွယ်ပေးမဲ. အဖွဲ.အစည်းမရှိတော.ဘူးဆိုရင်တော.......မြန်မာပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ စပြီးကွယ်တော.မလားဆိုပြီး.....ကိုယ်.ကိုကိုယ်မေးမိတယ်။။။။။
10 September 2008 at 14:47
Win Kyaw said...
Wow....so great! Keep go on!I check this and like this! Make it clear!Keep the Truth! Kyaw Hein Needsalesson!Please ...give himalesson!
Nyaminthar...you're so Brilliant!
အခုတလောမှာ လူပြောများနေတဲ့ ဦးကျော်အကြောင်းလေးဖတ်မိလို့ စိတ်ထဲရှိတာလေးဝင်
ရေးခဲ့ပါတယ်။ ရဟန်းမြတ်တစ်ပါးဖြစ်လာရေးမှာ သူနုစဉ် ငယ်စဉ် ပါရမီမရင့်စဉ်က ရှိခဲ့ဖူး
တဲ့ အမှားတွေဟာ အတော်အရေးပါတယ်လို့ ကျွန်မ မသိထားပါဘူး။ အမှန်တရားတွေဆို
တာကို အမှားတွေထဲကနေပဲရှာတွေ့ ခဲ့နိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူ
ရှာတွေ့ ခဲ့တဲ့တရားတွေကို သိပ်ပြောပြချင်နေခဲ့တာဖြစ်နေမလားပဲ။ ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မှ တရားမင်
ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း သူ့ ကိုခင်မင်ရင်းရှိပြီးသား လူထုက အားပေးကြလို့ ခုလိုတရားပွဲတွေ
လက်မလည်အောင်လက်ခံထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်မယ်။ နောက် တရားပွဲ ပရိတ်သတ်ဆိုတာက
လည်း ဘယ်လိုရဟန်းရဲ့တရားကိုနာသင့်တယ် ဘယ်လိုရဟန်းကိုတော့ မနာသင့်ဘူးဝေဖန်
ခွဲခြားနိုင်သူတွေဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါလိမ့်ဦးမယ်။ အမှန်ကတော့ “တရားရှာ ကိုယ်မှာတွေ ”့
ဆိုသလို အမှန်တကယ်တရားရှာချင်ရင် ဦးကျော်ဘုန်းကြီး ဆီမှာရှာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာ
လည်း သိချင်မှသိကြဦးမယ်လေ။ တရားရှာပါတယ် ဆိုမှ ဆရားမသိကြ တရားမရှိကြသေး
လို့ ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်သိပြီးသူ တရားရှိပြီးသူတွေကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတွေမရှိမထား
ကြတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်က တရားမသိရှာသူ
တွေကို ပေးမယ့်တရားဟာ တရားစစ် တရားမှန်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးလာပါတယ်။
သည်လိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကို ကိုင်တွယ်စဉ်းစားကြရမယ့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ အခု
ကိုထိုက်တို့ စဉ်းစားသလိုစဉ်းစားနိုင်ကြပါစေလို့ ကျွန်မ၀င်ပြီး ဆုတောင်းမိပါတယ်။ အရင်
က ဦးကျော်ရဲ့အနုပညာကို လေးစားမိသူ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်မတောင် ဒီနေ့ 
နံနက်ပဲ အဲဒီသတင်းကြားတော့ “မဟုတ်သေးပါဘူး၊ နောက်ဆုံးခရီးဆိုပြီးလိုက်လှည့်လည်
နှုတ်ဆက်နေတာကိုက အဲဒီအောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ကျော်ဟိန်း ဆိုတဲ့ဘ၀ကို သိပ်တန်
ဖိုးထားနေသေးသလိုဖြစ်နေတယ်” လို့ ကျွန်မခံစားမိတယ်။ တကယ်ဆိုရိုးရိုးကုတ်ကုတ်
လေး လောကီဘောင်ကို စွန့် သွားခဲ့ရင်တောင် ကျွန်မတို့ က လိုက်ရှာပြီး ကိုးကွယ်နေမိဦး
မှာ။ အခုတော့ရဟန်းဘ၀မှာအားပေးကြဦးနော်ဆိုပြီး လူဝတ်ကြီးနဲ့ လိုက် promotion လုပ်
နေသလိုပါပဲ။ ကျွန်မရဲ့ အထင်လေးတွေဝင်ရေးခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။ ဦးကျော်လည်း အချိန်မီ
10 September 2008 at 18:16
I don't want to be too personal....but U Kyaw wasachild abuser once. Academy Sandar (actress) is his own niece,adaughter of Kyaw Hein's half sister. When he had affair with his niece,Sandar (a young teenager) U Kyaw was already married withachild. I agree that past mistake should not be brought to the present.....may U Kyaw find his "Nibbana" through the real Dhamma of Buddha.
10 September 2008 at 18:32
Good Post for everything
Let me tell you an incident.......Kyaw Hein and his wife Mi Mi used their family (Dr. Kyay Hmone Win's ) background and bought several used cars fromacompany in Japan, on credit (Ah-Kway). The manager of the company wasaBurmese business man ...so he had no choice but to let Mi Mi's husband Kyaw Hein gets what he wants. The owner (Japanese ) became impatient when the debt was not paid after5years. The Burmese manager tried several tactics to get the money back but never successful. Kyaw Hein and Mi Mi tried everything they can to avoid and threaten the business man who is now in trouble with his Japanese boss... Finally that man had to leave Japan.
Fortunately, he got intouch with Chaung-Wa Sayadaw, who was Kyaw Hein's mentor and teacher. Through the help of Sayadaw, he finally gotapiece of paper admitting that Kyaw Hein and Mi Mi owed money to this Japanese company for the used cars they bought (ah-kway) several years ago. Still today the company received only part of the money. What kind ofacharacter is Kyaw Hein? you can imagine.
Why did people call this guy "U" Kyaw, He doesn't deserve the title "U". For me he is just "Nga" kyaw who is drug addict, spoiled others people young daughters,aperson without any integrity. He will never beamonk, eventhough he covered himself withamonk robe, he is justa"Ah Yee Gyi" (A cult in the King Anawratha time who deflower the bridesanight before their wedding day or the idiot who is Russia Resputin equivalent)
網愛俱樂部網愛俱樂部網愛俱樂部網愛俱樂部網愛俱樂部網愛俱樂部網愛俱樂部網愛俱樂部網愛俱樂部網愛俱樂部激情網愛激情網愛激情網愛激情網愛激情網愛激情網愛激情網愛激情網愛激情網愛激情網愛kk視訊kk視訊kk視訊kk視訊kk視訊kk視訊kk視訊kk視訊kk視訊kk視訊sogo 成人論壇sogo 成人論壇sogo 成人論壇sogo 成人論壇sogo 成人論壇sogo 成人論壇sogo 成人論壇sogo 成人論壇sogo 成人論壇sogo 成人論壇成人動畫論壇成人動畫論壇成人動畫論壇成人動畫論壇成人動畫論壇成人動畫論壇成人動畫論壇成人動畫論壇成人動畫論壇成人動畫論壇免費情色影片觀賞免費情色影片觀賞免費情色影片觀賞免費情色影片觀賞免費情色影片觀賞免費情色影片觀賞免費情色影片觀賞免費情色影片觀賞免費情色影片觀賞免費情色影片觀賞免費貼圖區免費貼圖區SEX520免費影片免費貼圖片區sex貼片區免費貼圖片區免費a片貼圖區sex貼片圖片區sex貼圖片區sex免費a圖片區日本美女寫真集日本美女寫真集日本美女寫真集日本美女寫真集日本美女寫真集日本美女寫真集日本美女寫真集日本美女寫真集日本美女寫真集日本美女寫真集av女優VS檳榔西施av女優VS檳榔西施av女優VS檳榔西施av女優VS檳榔西施av女優VS檳榔西施av女優VS檳榔西施av女優VS檳榔西施av女優VS檳榔西施av女優VS檳榔西施av女優VS檳榔西施ut聊天室聊天室ut聊天室聊天室ut聊天室聊天室ut聊天室聊天室ut聊天室聊天室ut聊天室聊天室ut聊天室聊天室ut聊天室聊天室ut聊天室聊天室ut聊天室聊天室色情豆豆聊天室色情豆豆聊天室色情豆豆聊天室色情豆豆聊天室色情豆豆聊天室色情豆豆聊天室色情豆豆聊天室色情豆豆聊天室色情豆豆聊天室色情豆豆聊天室色情聊天室色情聊天室色情聊天室色情聊天室色情聊天室色情聊天室色情聊天室色情聊天室色情聊天室色情聊天室男人尋夢園聊天室男人尋夢園聊天室男人尋夢園聊天室男人尋夢園聊天室男人尋夢園聊天室男人尋夢園聊天室男人尋夢園聊天室男人尋夢園聊天室男人尋夢園聊天室男人尋夢園聊天室080中部人聊天室080中部人聊天室080中部人聊天室080中部人聊天室080中部人聊天室080中部人聊天室080中部人聊天室080中部人聊天室080中部人聊天室